आज फर्मासिष्टहरूको विशेष दिन। सेप्टेम्बर २५ अर्थात् ‘विश्व फर्मासिष्ट दिवस’। ‘फर्मासिष्ट तपाईंको औषधि विशेषज्ञ’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष नेपाललगायत विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै छ।
भनिन्छ, थोरै खाए अमृत, धेरै खाए विष। हरेक चिजलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नसके अमृत समान हुन्छ तर त्यसलाई विवेकपूर्ण तवरले प्रयोग गर्न नसकिएको खण्डमा विष नबन्ला भन्न सकिन्नँ।
औषधिबिना उपचार सम्भव छैन। त्यो तपाइँ–हामी सबैले बुझेको कुरा हो। अनि त्यही उपचार गर्ने औषधिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्ति हुन् ‘फर्मासिष्ट’ अर्थात् ‘औषधिविज्ञ’। विश्वमै स्वास्थ्य क्षेत्रको अत्यन्त सम्मानित एवं संवेदनशील क्षेत्र हो ‘फार्मेसी’ तर विडम्बना नेपालमा त्यस्तो हुन सकेन। कानुन छ, तर कारबाही हुँदैन, हुन्छ त केवल ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’। नियम बन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन जे बन्छ, त्यो कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। सबै क्षेत्र केवल बन्छ त अस्तव्यस्त मात्र अनि कसरी हुन्छ विकास? यसको जिम्मेवार निकाय को? अनि कसले गरिदिने त्यसको अनुगमन? अनि टाउकोमा हात राखेर भन्न बाध्य बनाइन्छ ‘बिग्रिएको घरको भत्किएको चाला।’
‘एउटा चिकित्सकले एकपटक गरेको गल्तीले एकजना बिरामीको स्वास्थ्यमा असर पर्छ, तर एउटा फर्मासिष्टले त्यही एकचोटी गरेको गल्तीले हजारौं बिरामीको स्वास्थ्यमा असर पर्छ। त्यसकारण सधैं संयमित भएर पढ्ने गर,’ एक जना शिक्षकले बि. फार्मेसी कक्षा सुरु भएको पहिलो दिन भन्नुभएको थियो। ‘अहो! कसरी?’ मैले निकै उत्सुकताका साथ प्रश्न गरें। ‘औषधि कम्पनीमा एउटा ब्याचमा लाखौंको संयामा औषधि उत्पादन गरिन्छ। त्यस समयमा फर्मासिष्टबाट एउटा सानोमात्र गल्ती हुन पु¥यो भने त्यसको सेवन गर्ने बिरामीमा त्यसको असर पर्छ? त्यतिमात्र कहाँ हो र, तिमीहरूले पत्ता लगाएको कुनै एउटा नयाँ औषधि राम्रोसँग अध्ययन नै नगरी बजारमा आयो भने त्यसको असर कति बिरामीमा पर्ला? आफैं सोच त, त्यसकारण आफ्नो पेसाको संवेदनशीलतालाई कहिल्यै नभुल्न,’ उहाँले भन्नुभएको थियो ।
विभिन्न अध्ययनलाई हेर्ने हो भने यहाँ औषधि खान नपाएरभन्दा खाएर मर्ने तथा त्यसको शरीरमा नकारात्मक असर पर्नेहरूको संख्या बढी देखिन्छ। कारण हो, औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग नहुनु। साथै आम जनमानसमा पैसा तिरेर औषधि किनेर खान पाउनु आफ्नो अधिकार हो भन्ने भ्रम रहेको पाइन्छ। फलस्वरुप चिकित्सकको सल्लाहबिना नै औषधिको खोल देखाएर, नाम भनेर, मोबाइलमा म्यासेज वा फोटो देखाएर फार्मेसीमा औषधि लिन आउनेको संख्या उल्लेखनीय पाइन्छ। जहाँ चिकित्सकको पूर्ण सिफारिस नहुने हुँदा उक्त औषधिको प्रयोग बिरामीका लागि आवश्यक हो वा होइन भन्ने कुरा सुनिश्चित हुँदैन।
यतिमात्र नभई प्रेस्क्रिप्सनबिना बिक्री–वितरण गर्न नहुने औषधि कानुनी प्रावधानलाई अवलम्बन गर्दै बिनाप्रेस्क्रिप्सल बिक्री–वितरण गरेको खण्डमा औषधि क्रेता झर्कने, झगडा गर्न तम्सने तथा ‘मैले मागेपछि दिनोस् न, के फरक पर्छ? औषधी मेरा लागि हो, मैले खाने हो, तपाईंलाई के मतलब। असर गर्छ त मलाई गर्छ’ भन्नेजस्ता तथ्यहीन तर्कहरु पेस गर्दै स्वास्थ्यकर्मीलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरु राख्ने गर्दछन्। अझै भनौं, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिन खोज्दैनन् वा दिएका सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दछन्। जसको कारण आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारिरहेका हुन्छन्।
हामी चिकित्सक र फर्मासिष्टको सल्लाहबिना नै आफूखुसी वा हचुवाको भरमा औषधि प्रयोग गर्छाैं, अझै भनौं आफ्नो घर वा छिमेकको व्यक्तिलाई बिरामी पर्दा ल्याएको औषधि आफूलाई पनि त्यस्तै समस्या भएको त हो नि, किन जँचाउनुप¥यो, अनि किन सल्लाह लिइराख्नु प¥यो भन्छौं र त्यसको प्रयोग गर्छाैं। त्यो औषधि आफूले प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यसको प्रयोगले आफ्नो स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पो गर्छ कि? भन्नेजस्ता कुरामा खासै ध्यान दिंदैनौं। जसको कारण हाम्रो शरीरमा सामान्यदेखि जटिल समस्या समेत नआउला भन्न सकिंदैन, त्यसले गर्दा हाम्रो शरीर जोखिममा समेत रहन सक्छ।
हस्पिटलका फार्मेसीहरू निजीकरण गरिनु, जसले गर्दा आम उपभोक्ता औषधिको गुणस्तर र मूल्यमा ठगिनुपरेका गुनासा बाहिर आउने गरेका छन्। देशका होनाहार युवायुवती लागू औषधको दुव्र्यसनमा फस्नु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थी र स्वास्थ्यकर्मी स्वयं यसबाट अछुतो नरहनु, गर्भनिरोधक ७२ घण्टे आकस्मिक चक्की अस्थायी साधनका रूपमा प्रयोग गरिनुलाई युवापुस्ताले फेसन नै बनाएका छन्, जसको कारणले औषधिको दीर्घकालीन असर हुनाका साथै त्यस्ता व्यक्तिहरूले सावधानी नअपनाउँदा यौनजन्य सरुवा रोगको प्रकोप बढ्ने उच्च जोखिम समेत उत्तिकै देखिन्छ। बिनादर्ता फार्मेसी सञ्चालन गरिनु, दर्ता भएकाको पनि आफ्नो लाइसेन्स नहुनु, औषधि बिक्री–वितरण गर्दा फर्मासिष्ट उपस्थित नहुनुजस्ता थुप्रै अवैधानिक गतिविधि सञ्चालन भइराख्दा पनि विभिन्न कानुन हुँदाहुँदै पनि औषधिको हालीमुहाली सुम्पिएर बसेको संस्था, औषधी व्यवस्था विभाग ‘म पिटेझैं गर्छु, तँ रोएझैं गर्’ भनेजस्तै गरेर मूकदर्शक बनेर बसेको देखिन्छ। यो लाचारीपन कहिलेसम्म हावी रहने हो? फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासमा सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान पुगोस्। औषधिलगायत औषधिजन्य पदार्थको लागि विदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आगामी दिनमा नआओस्।
उपचारको क्रममा हरेक औषधिको आ–आफ्नै सेवन तथा प्रयोग विधि हुन्छन्, तर बिडम्बना! त्यो औषधि कतिबेला, कस्को लागि, कति मात्रामा, कसरी सेवन गर्ने भन्नेजस्ता स्तरीय निर्देशनलाई समेत पालना नगरी आ–आफ्नै तरिकाले जसरी मनलाग्यो त्यसैगरी प्रयोग गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको पाइन्छ। जसको प्रतिफल स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै ठूलो संकट नआउला भन्न सकिन्नँ। त्यसकारण औषधिको सही र विवेकपूर्ण प्रयोगतर्फ सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायले समयमै ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ। बिरामीको उपचार गर्नु हामी स्वास्थ्यकर्मीको मूल उद्देश्य हो, त्यसको लागि हातेमालों गरौं । कोही उपचारबाट बञ्चित हुन नपरोस्। स्मरण रहोस्, ‘सेवा नै ठूलो धर्म हो।’
- (लेखक पाठक नेसनल सिटी हस्पिटल, चितवनका फार्मेसी इन्चार्ज हुनुहुन्छ साथै भरतपुर अस्पतालमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ ।)